बियरले यति धेरै खत रनाक रोगबाट जोगाउछ, जन्नुहोस बियरका फाइदा ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २८, २०७७ समय: १९:१२:०६
२. बियर पिउने हो भने ह्दय घा तबाट बच्न सकिन्छ । आर्टरीमा भएको बोसो तथा कोलेस्टरोल हल्का मात्रामा बियर खाने हो भने कम हुन्छ ।३. स्ट्रोकको खत रालाई पनि बियर पिएर कम गर्न सकिन्छ । विशेषगरी रगत जमेर दिमागमा अक्सिजन तथा रगत सञ्चार नहुने खत राबाट ठिक्क मात्रामा बियर लिने हो भने कम हुन्छ ।
४. हाम्रो शरीरमा भएका हाडलाई बलियो र मजबुत पार्ने काममा बियरले सहयोग गर्दछ । हाडलाई मजबुत गर्ने तत्त्व भनेको सिलिकन हो जुन बियरमा अत्यधिक मात्रामा पाइन्छ ।५. मधुमेहका बिरामीलाई बियर निकै हितकारी मानिन्छ । दिनमा एक गिलास बियर खानाले टाइप २ नामको मधुमेह हुने ख तरा २५ प्रतिशतले कम हुने गर्दछ ।
८. राती आँखा नदेख्ने मानिसलाई बियर अमृत नै मानिन्छ । तर यसको मात्रा भने ठिक्क हुनु आवश्यक छ । आँखामा भएको माइक्रोकोन्ड्रिय खरा ब भएपछि मानिसले आँखा देख्दैनन् । आँखामा भएको यस भागलाई स्वस्थ राख्न बियरमा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले निकै ठूलो भूमिका खेल्दछ ।
१७०२ पटक हेरिएको